Mandefasa hafatra manimba tena amin'ny fampiharana Kaboom | Androidsis
Hatramin'ny nahatongavan'i Snapchat ho serivisy ampiasain'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, ny fandefasana hafatra na sary manimba tena dia nitranga tamin'i Inspector Gadget sy ireo baomba izay hitanay tao anatin'ireo andian-dahatsary malaza nataony taloha. Ny zava-bitan'ity rindrambaiko ity tamin'ny hafatra sy sary manimba tena aorian'ny fotoana voafaritra, dia na ireo anarana lehibe amin'ny haitao aza dia nahatsikaritra ny serivisiny. manahafa azy ireo amin'ny fampiharana samihafa. Tsy hoe izao no fotoana, fa na facebook aza nitsambikina tao anaty pisinina izy mba hanandrana haka ny mofomamy mofomamy mahafinaritra avy any Snapchat.
Ity kalitaon'ny hafatra Snapchat ity dia azo jerena amin'ny fampiharana vaovao antsoina hoe Kaboom ary ny tsy fitovizany lehibe dia ny mpampiasa mandray tsy mila manoratra kaonty ianao handraisana hafatra toy izany. Eo no ahitan'ity serivisy vaovao ity ny fahefana rehetra hampiasa rohy URL web hahafahantsika miditra amin'ilay hafatra na sary mety lany daty ao anatin'ny fotoana iray na avy amin'ny mailaka na amin'ny tranokala aza.
1 Kaboom sy ny potentiny lehibe
2 Ny fahaizan'ny fahaiza-manao, ny tena mety
Kaboom sy ny potentiny lehibe
Na dia manaraka ny zava-nitranga tamin'i Snapchat aza i Kaboom, ny marina mamela ny mpampiasa hifandray amin'ny hafa amin'ny alalany hafatra na sary manimba tena Afaka manampy anao hanana mpanaraka izy io, na dia tsy ho mora aminao aza io na dia manana io toetra matanjaka io aza amin'ny voalohany.
Amin'ny fotoana hanombohantsika ity fampiharana ity dia afaka manoratra hafatra miaraka amina sary na lahatsoratra isika amin'ny fotoana mety vitantsika ovao ny fotoana hanimbany tena tanteraka. Ny iray amin'ireo pitsopitsony izay ananany dia ny ahafahantsika manova ny ora fotoana ahafahana mamerina mamorona ny URL web izay hozarainay. Ny iray amin'ireo kalitaony dia ny ahafahantsika mamorona hatramin'ny taona maro ho fetran'ny famokarana amin'ny fotoana. Hanomboka ny famataran'ora amin'ny fotoana nanokafan'ny mpandray ny hafatra.
Ny fahaizan'ny fahaiza-manao, ny tena mety
Ny ahafahantsika mizara izany hafatra izany amin'ny mpampiasa rehetra avy amin'ny fampiharana na inona na inona dia hatsaran-toetra lehibe, satria afaka izany nalefa na dia avy amin'ny tambajotra sosialy aza na serivisy mpampita hafatra. Raha mbola manana URL web ny mpandray dia ho afaka hamerina ilay hafatra na sary nalefa izy. Teo no nilalao ny filohan'i Kaboom hiavaka amin'ny tolotra hafa izay tsy avela zaraina amin'ny alàlan'ny SMS ny sarin'ity karazana ity, hanome ohatra iray amin'izany.
El tsy manery olona hamorona kaonty Ny fahazoana hafatra amin'ity karazana ity dia toerana hahitantsika ny mampiavaka azy amin'ny fametrahana azy ao amin'ny terminal antsika, ary izany dia ny fampiharana azy ho an'ny Android sy ny iOS dia miasa toy ny manintona.
Tsy handray zavatra handefasana hafatra izahay, satria tsy mila kaonty mpampiasa izahay raha tianay. Noho izany ny fampiharana dia hahafahanao manararaotra betsaka indrindra amin'izany hanatanterahana ny karazana asa rehetra mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny olona amin'ny fomba rehetra.
Raha hiakatra, Kaboom dia noforonina mitovy amin'ny VPN Hotspot Shield, noho izany dia fanamafisana tsara ny fialana amin'ity serivisy ity mba hifandraisana amin'ireo havana aman-tsakaiza. Mazava ho azy, tadidio foana fa izay zarainao amin'ny serivisy toa an'io na Snapchat, dia azo aseho foana raha misy olona maka pikantsary na mitahiry ny sary amin'ny fomba mety rehetra, noho izany raha resaka azo antoka sy matotra dia aleo miala amin'ny hafa serivisy. Kaboom dia mifanentana tanteraka amin'ny fialamboly miaraka amin'ny namana na zavatra hafa mahafinaritra sy mahafinaritra.
Azonao ilay izy maimaim-poana ao amin'ny Play Store amin'ny Android ary koa amin'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Manome anao hafatra manimba tena i Kaboom hizara amin'ny olona rehetra
Mitadiava tontolo sy planeta vaovao miaraka amin'ny The Road to Luma